छोराछोरीको दूधे दाँत सम्हालेर राख्नुस्, काम लाग्छ यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा ! – Jagaran Nepal
बालबालिकामा दाँतको समस्या
। व्यस्त जीवनशैलीका कारण अभिभावकले छोराछोरीलाई प्रशस्त समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । छोराछोरीलाई स्कुलमा टिफिन पठाउँदा होस् वा रोएको बेला फकाउँदा, गुलिया मिठाइको लोभ देखाइन्छ । आफन्तले पनि घरमा आउँदा बच्चाहरूका लागि आइसक्रिम, क्यान्डीलगायत गुलिया मिठाइ ल्याइदिन्छन् । बालबालिकाले गुलिया खाद्यवस्तु मन पराउने भएकाले उनीहरूको दाँत बिग्रिने सम्भावना अरुको तुलनामा बढी हुने ग्रान्डी अस्पतालका डेन्टल सर्जन अमित खनाल बताउँछन् । गुलिया मिठाइ अत्यधिक सेवन गर्ने तर त्यसअनुसार सफाइमा ध्यान नदिने कारण दाँत बिग्रिने समस्या बालबालिकामा बढी हुन्छ । राति सुत्दा बच्चालाई बोतलको दूध चुसाइरहँदा पनि बच्चाको दाँत किराले खाने डा. खनालको भनाइ छ ।